Archive du 20190507
Fanodinkodinana fiara « 4x4 » folo Minisitra iray teo aloha voarohirohy
Minisitra iray teo aloha mbola manana toerana ambony eto amin’ny firenena no manana dosie goavana eny amin’ny sampandraharaha miady amin’ny kolikoly na ny Bianco, raha ny fikaroham-baovao natao.
Filoha Rajoelina Hisisika hampandany ny kandidàny
Maro ireo mpanao politika, mpanara-baovao, olom-pirenena no miandry izay ho vokatry ny fifidianana solombavambahoaka.
Fampielezan-kevitra Aoka isika hilamina, hoy ny polisim-pirenena
Ny Ceni no nanome alalana ireo kandida amin’ny fampielezan-kevitra saingy hanara-maso ny polisim-pirenena mba hitsinjovana ny mponina.
Fitantanana miangatra Tena sosotra ny polisim-pirenena…
Sosotra no sady tezitra ny polisy fa tsy misy firaharahiana an-dry zareo mihitsy avy amin'ny fitondrana.
Fahamaizana teny amin’ny FLM Ambatovinaky 10mn dia voafehy ny afo
“Folo minitra dia voafehy tanteraka ny afo. Efa efitra efatra no kila forehitra. Ny trano roa tao ambony izay niavian’ny afo no nihintsana tao ambany ka nahahotohoto tanteraka ireo efitra efatra ireo.
Finoana Silamo - Ramadany Nanomboka omaly
Nanomboka omaly alatsinainy 06 mey ny ramadany amin’ity taona 2019 ity ho an’ireo mpino silamo manerana ny Nosy.
Faha-80 taonan’ny sekoly Advantista Fotoam-bavaka no nisantarana azy
Nankalazaina tamin’ny alahady 05 mey lasa teo ny fanombohana ny fankalazana ny faha-80 taonan’ny sekoly advantista Soamananandrariny na ny Lypars.
Dax Andriamirado Arohasina Hiverina hilalao ao amin’ny BAREA
Namoaka fanambarana ofisialy tamin’ny 4 mey 2019 teo ny amin’ny hiverenany hilalao indray eo anivon’ny Barea de Madagascar i Dax “Andrianarimanana Andriamirado Arohasina” mpilalao fahiny tao
Basikety Tompondaka nasionaly N 1 B vehivavy sy U 20 G Maresaka any Fenoarivo Atsinanana
Miditra amin’ny andro faha-4 anio talata 07 mey ny fifaninanam-pirenena eo amin’ny taranja basikety sokajy N1 B vehivavy sy U 20